‘आइ अल्वेज ट्राई डिफ्रेण्ट’ – केकी अधिकारी-Nagarikaawaj.com
‘आइ अल्वेज ट्राई डिफ्रेण्ट’ – केकी अधिकारी
अहिले नेपाली चलचित्र ईण्डष्ट्रिज दुई चलचित्रले तताएका छन् । ‘वितेका पल’ र ‘छ एकान छ’ ले फेरी निराश वनेको नेपाली चलचित्र उद्योगलाई आशाको केन्द्रतिर फर्काएको छ । यहि तातेको माहौलमा चलचित्र ‘वितेका पल’ की केकी अधिकारीको चर्चा सर्वाधिक छ । उनको अभिनयको तारीफ गर्नेहरुले यसै भन्छन्, –‘नेपालकी एक नम्वर नायीका केकी अधिकारीनै हुन ।’ नेपाली चलचित्रका दर्शक नभएका वेला वितेका पलले त दर्शक खर्लप्पै तान्योनी भनेर यि स्विटी नायीका अधिकारीलाई सोध्दा जवाफ चाहि यस्तो दिईन्, –‘हाम्रा दर्शक जति पनि छन्, राम्रा चलचित्र वन्न नसक्नु र वनेपनि प्रमोसन त्यसै अनुसार हुन नसक्नुले यस्तो निराश वनाएको हो ।’ त्यसो भए २०१४ को सर्वाधिक सफल र रुचाईएको चलचित्र वितेका पलनै हो त ? केकी अधिकारीसँग रगंपत्रकार रामजी ज्ञवालीले गर्नुभएको सिने–गफगाफ ः
नेपाली चल चित्रले पनि यत्तीका दर्शक तान्ने रहेछनी त है केकी जि ?
– म जहिले पनि सोच्छु, सोच्दै आएको पनि छु । यहाँ राम्रा चलचित्र वन्न नसकेर मात्रै हो । किनभने राम्रा चलचित्र वन्नेहो भने दर्शक जत्ति पनि छन् ।
त्यसो भए यस अघि यस्ता राम्रा चलचित्र वनेका थिएनन त ?
– राम्रा चलचित्र नवनेका हैनन, केही राम्रा चलचित्रहरु पनि नेपालमा वनेका थिए । तर निरन्तर वन्न नसक्नुले दर्शकमा निराशा छाएको हो । नेपाली चलचित्र राम्रा वनिदिए दर्शकको भिड नहुने भन्ने हुदै हुन्न । तर खाली राम्रो मुभी अनि राम्रो प्रमोशन गर्न र वनाउन जरुरी छ । जो अहिले ‘वितेका पल’ ले दर्शकको मन जितेको छ ।
त्यसो भए २०१४ को सर्वाधिक सफल र रुचाईएको चलचित्र वितेका पलनै हो त ?
– यो कुरा दर्शकले छान्ने कुरा हो । तर मलाई लाग्छ वितेका पलले जितेको दर्शकको मन र मैले पाएको प्रतिक्रिया अनुसार २०१४ को सर्वाधिक सफल सिनेमा वितेका पल हुनेछ ।
तर वितेका पलसँग ‘छ एकान छ’ ले चुनौती दिएको छ ?
– मैले ‘छ एकान छ’ लाई नराम्रो अथवा दर्शक तानेको छैन भनेको छैन । त्यो चलचत्रि हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा राम्रो हो । त्यो चलचित्रले पनि नेपाली निराश चलचित्र उद्योगमा धेरै आशा थपेकै छ । यो पनि त्यस्तै उदाहरण हो वितेका पल जस्तै ‘गुड फिल्म विथ गुड प्रमोशन’ । वितेका पलले चाहि दर्शकलाई रुवाएको छ, यसको मतलव एकदमै मन पराउनुभएको छ । तर राम्रो र हाईयस्ट कलेक्सन गर्नुमा फरक हुन्छ ।
अहिले ‘वितेका पल’ र ‘छ एकान छ’ स“गै तपाई र निता जिको अभिनयलाई पनि वढि तुलना गरिएको पनि छ नि ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– कलाकारहरु विचको कम्प्यरीजन हैन किनभने उसको र मेरो क्यारेक्टर फरक छ । ‘सि ईज ईन अ कमेडि फिल्म, एण्ड मि ईन अ सिरीयस लभ स्टोरी’, शो ईट्स डिफ्रेण्ट टु कम्प्यर । तर निता जि एकदमै राम्रो नायीका हुनुहुन्छ । यसमा कुनै सकां छैन ।
सधै दर्शकलाई रुवाउने केकी जिलाई हसाउने चलचित्रमा अभिनय गर्ने मन छैनर भन्या ?
– मैले यस अघि रिलीज भैसकेको चलचित्र ‘महसुस’ मा एकदमै हँसाएको थिए । यसमा रुवाँए । आइ अल्वेज ट्राई डिफ्रेण्ट । त्यही भएकैले म यहाँ सम्म यसरी आउन सफल भएकी हुँ ।
अन्त्यमा, तपाईलाई अहिलेकी केकी अधिकारी वनाउन सवैभन्दा महत्वपुर्ण हात कस्को रह्यो ?
– मलाई बुबा (वद्रि अधिकारी) नै हुनुहुन्छ । उहाँकै प्रेरणाले अहिलेकी केकी अधिकारी भनेर चिनीन पाएकी हुँ ।